Incazelo: Chitha iholide lakho ogwini loLwandle Olubomvu ngesikhathi Titanic Palace 5, eyasungulwa ngo-2010, 10 nje km kusuka Hurghada Airport, izinyathelo ezimbalwa kusukela beach. Kuyinto ipharadesi langempela ngemindeni nezingane ngoba endaweni libanzi futhi ehlanzekile wakha omkhulu amanzi epaki nge-slide amanzi namadamu okubhukuda. Ukuze izivakashi zonke izimo amaholide ongasoze walibaleka, ephephile, okuphumuzayo futhi zikhululekile.
ezizungezile Kugcizelela ne lisebukhazikhazini balo landscaped, zonke ehlathini lapha - omuhle wobuciko: zasemazweni enhle wesilisa uyabukeka emehlweni bese uvumelane ngokuvumelanayo yokuphila ezindaweni eziphakathi nezwe ehhotela. Futhi phakathi le ndawo evundile oluhlaza ungomunye storey Bungalows futhi isakhiwo main, okuyinto iyisonto Room Front.
Ukuba Titanic Palace eziyinkimbinkimbi 5 Hurghada, uyoba njalo bazizwa isimo sengqondo friendly abasebenzi kanye non-komunye iholide emkhathini. Ukukhethwa enkulu zokudla emihle, ezokungcebeleka ahlukahlukene kanye isethulo ezithakazelisayo animated izovuleka iholide yakho ibe indaba esiyokhunjulwa for a lifetime.
Amagumbi: Pension Titanic Palace 5 has a yokuhlala 593 enamakamelo: Standard (eyodwa lokulala - akuvunyelwe ukubekwa kwezingane kwezinye izindawo), Suite, Family (2 okulala), bungalow Igumbi (35 m2 nge ukufinyelela pool ongaphandle - yokuhlala kuphela abantu abadala ngaphandle izingane) .
Igumbi ngalinye, kungakhathaliseki esigabeni sayo kahle ehlotshisiwe, ifakwe simiso air conditioning kanye ithala esikhulu, ukunikela imibono obumangalisayo egcekeni noma blue sea. Izimenywa zingabelana ngokukhululekile sisebenzisa Izinsiza enikeziwe ezifana lokugezela, plasma TV (satellite ithelevishini), ngocingo umugqa elide, ephephile, umshini wokomisa izinwele.
Kukhona i-Internet, kanye nesigaxa nge iziphuzo (okumele igcwaliswe ngenkokhelo). Awunayo ukucabanga mayelana nokuhlanzeka nokuhleleka lokhu ubungacabanga izisebenzi ukuthi zizosuswa nsuku egumbini lakho wembathise embhedeni.
Ukudla (zonke okufakayo): ukudla Inxanxathela nokunomsoco inikezwa izivakashi ngesikhathi Titanic Palace 5. Amazwana mayelana Khonza - ngomdlandla. On the amatafula zihlale nensada izithelo ezisanda kukhiwa, imifino, imikhiqizo yobisi inyama. Ukudla kuhlanganisiwe juice, amanzi, ukudla okulula futhi ezihlukahlukene kophudingi.
Emini, izivakashi ungavakashela zokudla (kuphela izikole 5 - ezintathu zazo ikhokhwe) kanye nemigoqo 6 esisogwini Insimu eziyinkimbinkimbi futhi ogwini. Kusihlwa, egijima ibha disco lapho ungaba fun futhi sizame iziphuzo elite.
Beach: Sandy, elula ihlanzekile futhi zigcinwe kahle ugu kungokwenkampani ehhotela Titanic Palace 5. It unikeza imishini lolwandle namanzi ezemidlalo.
Imininingwane engeziwe: Izivakashi sokulinda sezifakelwe amabhiliyade ikamelo, table tennis, slot machines, umoya we-hockey, ukuyodlala i-bowling, izindawo amageyimu ongaphandle kanye nezinye izindawo eziningana lapho ezemidlalo. Osomabhizinisi bazokwazi ukuqhuba izingxoxo adingekayo ukhululekile futhi ngobuchwepheshe ifakwe amagumbi.
Impilo yakho unga, vakashela isikhungo SPA, lapho izisebenzi ezinolwazi professional ukuqhuba eziyinkimbinkimbi ubuhle nempilo ukwelashwa. Uyoba ejimini, libe i-disco, a salon ubuhle. Uma wayefisa, izindleko ezengeziwe nawe massage okuphumuzayo.
izivakashi Omncane uzobe ajabulela nge Izithombe fun, amaslayidi amanzi kanye imidlalo Igumbi. Ezinganeni kukhona cinema nokuthuthukisa club. Izingane unikezwa imenyu ehlukile, izihlalo okusezingeni eliphezulu nasezinhlakeni.
Digest: Excellent intsha izivakashi isikhungo Titanic Palace 5 izibuyekezo eziningi zezihambeli ufanelwe izilinganiso eliphakeme nokudumisa engcono. Ngesikhathi ukuphakama inkonzo, ukudla izinga, a yokuzilibazisa yehlukene kaningi okubalwa futhi amakamelo Tastefully ahlotshiswa. Abazali ezincane wakhuluma kahle ngenkonzo yezingane.
Ihhotela ihlale ihlanzekile futhi ukhululekile - izisebenzi njalo friendly futhi anake izicelo izakhamuzi '. Aqua nokuziqhenya awubufakazi yilapho ungakwazi zingena emhlabeni, ukubhukuda kanti futhi yenyuse izinsuku ukuphela. izithombe avulekile futhi ezithakazelisayo futhi Uhlelo ukuzijabulisa. Kubantu abasha ukuvula disco bobalili. Uma ufuna ukwenza iholide lakho okucebile, kumnandi futhi ongasoze - ukhululeke ukuya Hurghada.
Amahhotela Petersburg - ithemba kodwa uqinisekise
"Achilleion Park" Kabardinka. Izithombe kanye nokubuyekeza zezivakashi
Sahara Beach Ihhotela 4 *: izithombe kanye nokubuyekeza
"Class: Life After." abadlali wazama
Lapho likhuluma 'Harry Potter "amaswidi: kusukela ekutholeni isendleleni eya Hogwarts!
Umthetho 63. Ihlaya le-Intanethi
Vent umphini amawindi plastic. amafasitela Plastic nge ukuzwakalisa
Kungani njalo ufuna ukulala futhi ukucobeka uvele? izimbangela